राष्टिय – korea pati
अब चीनमा १२ सय मात्रै कोरोना संक्रमित, २४ घण्टाभित्र एक जनाको पनि मृ’त्यु भएन
April 7, 2020 LeaveaComment on अब चीनमा १२ सय मात्रै कोरोना संक्रमित, २४ घण्टाभित्र एक जनाको पनि मृ’त्यु भएन
काठमाडाैं, २५ चैत । कोरोना भाइरसकाे प्रकोपका कारणले विश्व आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका छन् । विभिन्न देशहरुले कोरोनाबाट बच्न लकडाउन अपनाइरहेका छन् । गत डिसेम्बरदेखि चीनको वुहानमा महामारीको रूप लिएको भाइरसले पछिल्लो समय चीन बाहिर संकट निम्त्याइरहेको छ । अहिले युराेपेली देशहरू बेलायत, जर्मनी, […]
April 7, 2020 LeaveaComment on राष्ट्रपति बन्न सुहाउने ब्याक्तित्व: हिमानी शाह, मन परे सेयर गर्नुहोस्।
काठमाडाैं। पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म १ अक्टोबर, १९७६ मा भारतको राजस्थान सिकरमा भएको हो। हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहको कोखबाट जन्नम लिएकी हुन्। हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे भएको थियो। उनले छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई जन्न दिएकी हुन्। […]
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन गरिएको विवादास्पद ठेक्का सम्झौता रद्द!
April 1, 2020 LeaveaComment on चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन गरिएको विवादास्पद ठेक्का सम्झौता रद्द!
काठमाडौं सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोकथाम तथा परीक्षणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन गरेको विवादास्पद ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) नामक कम्पनीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र […]
January 3, 2020 LeaveaComment on सिद्धार्थ गौतमबुद्ध क्याम्पसमा सप्ताहब्यापी कार्यक्रमको समापन सम्पन्न
December 24, 2019 January 5, 2020 LeaveaComment on अनुष्काले भनिन् – नेपाल सगरमाथाको देश भन्ने धेरैलाई थाहा रहेछ
December 23, 2019 January 5, 2020 LeaveaComment on मेरो जिन्दगी कागती खेतिमै बित्ने छ – आचार्य
December 22, 2019 January 5, 2020 LeaveaComment on सेनालाई स्याबासी
December 22, 2019 January 2, 2020 LeaveaComment on यस्तो बन्नेछ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भिडियोमा हेर्नुस
December 19, 2019 January 2, 2020 LeaveaComment on श्वेता खड्काले श्रीकृष्णको सम्झनामा बनाइदिएकी माझी बस्ती
December 13, 2019 January 15, 2020 LeaveaComment on नेपालले विश्व क्रिकेट लिग टु अन्तर्गत ओमन र अमेरीकासँगको त्रिकोणीय एकदिवसीय सिरिज खेल्ने
नेपालले फ्रेबुअरी ५ देखि १२ सम्म कीर्तिपुरमा विश्व क्रिकेट लिग टु अन्तर्गत ओमन र अमेरीकासँगको त्रिकोणीय एकदिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ । दुई दिनअघि काठमाडौं सम्पन्न आईसीसीको प्रतिनिधि मण्डल र क्यानको बैठकमा सिरिजको तयारीबारे छलफल भएको हो । ओमन र अमेरिका दुवै एकदिवसीय मान्यता प्राप्त टोली भएका कारण सो सिरिजलाई आईसीसीले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता दिनेछ […]